Azonao atao izao ny beta an'ny Android 7.1.2 ho an'ny Pixel, Pixel XL, Nexus Player ary Nexus 5x | Vaovao momba ny gadget
Android 7.1.2 beta navoaka ho an'ny Pixel, Pixel XL, Nexus Player ary Nexus 5X
Ity taona ity dia ho niavaka rehefa tonga Fanavaozana lehibe Android rehefa navoaka ny 7.0 lehibe miampy izay mety ho fanavaozana kely telo hanampiana andiana efatra amin'ny fitambarany. Ireo zaza tsy ampy taona telo ireo dia hitondra fiasa fanampiny miampy andiam-panatsarana mba hahavonona ny Nougat ho an'ny kinova Android manaraka.
Androany dia nanomboka tamin'ny Google ny Google Famolavolana Android 7.1.2 beta Nougat ho an'ny fitaovana Nexus sy Pixel isan-karazany ao anatin'izany ny Pixel, Pixel XL, Nexus 5X, Nexus Player ary Pixel C.Ny Nexus 6P ihany koa dia hanana an'ity kinova madinidinika vaovao ity, na dia andro maromaro vao azonao idirana izany.
Ireo izay mijanona any ivelany izy ireo ny fanavaozana ny Nexus 6 sy ny Nexus 9, noho izany dia hijanona amin'ny Android 7.1.1 izy ireo. toy ny kinova farany. Antenaina izany, satria nanamafy i Google tamin'ny androny fa tsy hisy antoka momba ny fanavaozana Android an'ireo fitaovana ireo aorian'ny volana oktobra 2016. Mazava ho azy fa hanana fitaovana fiarovana mandritra ny herintaona ireo fitaovana roa ireo.
Ny fanavaozana ny Android 7.1.2 beta dia miaraka aminy fanatsarana ho an'ny rafitra anisan'izany ny fanitsiana sy fanatsarana bug, raha mampiditra andiam-panatsarana ho an'ireo mpandraharaha sy mpampiasa, araka ny Google ihany, satria ny 7.1.2 dia rindrambaiko mampitombo ny fahombiazan'ny fitaovana amin'ny lafiny ankapobeny.
Android 7.1.2 dia misy amin'ny Pixel, Pixel XL, Nexus Player, ary Picel C amin'izao fotoana izao tranokala mpamorona avy amin'ny Android. Azo atao amin'ny alàlan'ny Programma Android Beta, izay fomba mora indrindra ahazoana azy. ny kinova farany amin'ny Android 7.1.2 Ho azo alaina ho an'ny fitaovana tohanana ao anatin'ny roa volana. Fanavaozana sasany izay efa tonga amin'ny 7.0 amin'ny sisa amin'ireo fitaovana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Android 7.1.2 beta navoaka ho an'ny Pixel, Pixel XL, Nexus Player ary Nexus 5X
Niato ny fivarotana ny Surface 3 i Microsoft
Viber dia mamela ireo mpampiasa tratry ny fameperan'i Trump hanao antso maimaim-poana